घरेलू उपकरण | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: घरेलू उपकरण
टिभी LCD "लेन्टल" के हो ???? म minutes 45 मिनेटको लागि उभिएँ, बढुवा ब्रान्डको तुलनामा, तर यसले उत्कृष्ट देखाउँदछ ...
टिभी LCD "लेन्टल" के हो ???? म minutes 45 मिनेटको लागि उभिएँ, यसलाई बढुवा ब्रान्डसँग तुलना गरें, तर यसले उत्कृष्ट देखाउँदछ ... मैले यो लामो समयदेखि गरिरहेको छु र मैले त्यो ब्राण्ड देखेको छैन। म तिमीलाई आश्वासन दिन्छु ...
एलजी वाशिंग मशीनमा ड्रम सफाई प्रकार्य कसरी सक्षम पार्नु हुन्छ?
म कसरी मेरो एलजी धुने मेसिनमा ड्रम सफाई कार्य सक्षम गर्न सक्छु? र निर्देशनहरूमा यसको बारेमा केहि छैन? यदि मेशिनसँग यो प्रकार्य छैन भने कुनै पनि हिसाबले स्विच नगर्नुहोस् ... "ड्रम क्लीन मोड इरादा गरिएको छ ...
टिभी बन्द गर्दै
टिभी लक गर्नु सेमीकेमिकल स्टोभमा जस्तै बच्चाहरूबाट सुरक्षा हुन सक्छ, तर त्यहाँ डाटा पाना # 10064; सेट मा त्यस्तै प्रकार्य छ। # १००10064;; स्मार्ट पासवर्ड # १००10064;; # १००10064;; # १०१10174; # १००10064;; सेटिंग्स # १००10064;; # १०१10137; # १००10064;; लक # १००10064;; # १०१10137; # १००10064;; # १००10064; पासवर्ड सेट वा TV पासवर्ड परिवर्तन गर्दछ # 9998 12300 0000;; मानक पासवर्ड # १२12301००; ००००० # १२XNUMX०१; ...
यो के मतलब छ जब तिनीहरू नौ, सात को बारे मा कुरा गर्छन
यसको अर्थ के हुन्छ जब तिनीहरू एयर कन्डिसनको बारेमा नौ, सात प्रख्यात ब्रान्डका सबै एयर कन्डिशनरहरू मानक आकारको पावरको नक्कली पैमानेमा हिड्दछन्। अधिकांश विभाजन-प्रणाली मोडेलहरूले नाममा पावर इन्डेक्स समावेश गर्दछ, जुन किलोवाटसँग मेल खाँदैन, ...
गज्जल स्तम्भ थाहा छ उनको जस्तै, के तपाई र तपाईलाई सल्लाह दिनुहुन्छ?
जससँग उसको जस्तो झानउसी ग्यास पानीको हीटर छ, तपाइँ अरू के सिफारिस गर्नुहुन्छ? Years बर्ष पहिले किनेको सबै बिक्रीमा छैन। त्यसोभए निर्माताहरू हाम्रो "समीक्षा" भन्दा अगाडि छन्। त्यसकारण टेकनीक लिनुहोस् जुनबाट ...
के मलाई स्मार्ट टिभी चाहिन्छ? कोसँग स्मार्ट टिभी छ?
के तपाईंलाई स्मार्ट टिभी चाहिन्छ? कोसँग स्मार्ट टिभी छ? Set 30 को मूल्यको एउटा सानो सेट-टप बक्स "मिडिया प्लेयर" ले तपाईंलाई स्मार्ट टिभीका सबै प्रकार्यहरू र अधिकको साथ कुनै पनि टिभी सुसज्जित गर्न अनुमति दिनेछ। वर्ष ...
कसरी बुझ्न ??? बबल वाशिंग मशीनहरू? तिनीहरू सामान्य देखि कसरी भिन्न हुन्छन् ???
कसरी बुझ्ने ??? बबल धुने मेशिनहरू? तिनीहरू कसरी सामान्य भन्दा फरक छन् ??? सम्भवत एयर-बबल फट))))))))))) कम्पनी डीईयूको वाशिंग मेशिनले १ 15 बर्ष भन्दा बढी समयदेखि विश्वासीपूर्वक सेवा गर्यो! यो धुने धेरै समय लिन्छ ...
LG p42la662v TV 3D को लागि कुन स्टीरियो जोडा बेहतर छ?
TV LG p42la662v कुन स्टीरियो जोडी थ्रीडीको लागि उत्तम छ? Q: कुन 3D भिडियो निष्क्रिय थ्रीडीको साथ एलजी टिभीको लागि उपयुक्त छ? उत्तर: तपाईले स्टेरियोपायर १ चयन गर्नुपर्नेछ जुन १3०× × ०० भन्दा बढि रिजोलुसनको साथ ...।
मलाई राम्रो बासको साथ हेडफोन्स बताउनुहोस्
राम्रो बास अडियो-टेक्निका ATH-CK303M राम्रा कानहरूको साथ शीघ्र हेडफोनहरू "vstutkom" हेर्नुहोस् म त्यहाँ vrayles ब्लूटूथ हेडफोन छ। २.१ ले लिए। म त्यहाँ सस्तो र बास पाउन सकेन, मात्र अद्भुत। प्रति ...
म एक एलईडी लैंप किन्न चाहन्छु, मेरो घरमा चिमनी सबै 60 बीटी प्रश्न भित्रको लागि डिजाइन गरिएको छ
म एक एलईडी बत्ती खरीद गर्न चाहान्छु, मेरो घरको फ्यान्डलीयर्स सबै W० डब्ल्यू को लागी प्रश्न गरीएको छ, सामान्यतया, जब एक एलइन्डे बत्तीको साथ एउटा तापक्रमित बत्ती बदल्दा, एलईडी बत्तीको शक्ति by. गुणा हुन्छ। यद्यपि, त्यहाँ ...
सिया फ्री को लागि ब्रश डाउनलोड गर्ने कहाँ
जहाँ साईका लागि ब्रशेस नि: शुल्क डाउनलोड गर्न को लागी तपाई आफैं SAI को लागी ब्रशेस बनाउन सक्नुहुन्छ। आधारभूत ब्रशेस फोल्डरमा छन् जहाँ SAI आफु रहेको छ (स्थान- जहाँ- SAIEasy पेंट उपकरण SAIelemap झूटा)। .BMP फाईलहरूको गुच्छा छन्। १ ...
टिभीको कुन ब्रान्ड राम्रो छ?
तपाईले कुन ब्रान्डको टिभी किन्नु पर्छ? फिलिप्सले मुख्य कुरालाई फरक पार्दैन कि टिभी संकेत उच्च गुणको छ, उदाहरणका लागि, डिजिटल टिभी तस्विर राम्रो छ, एनालग टिभी संकेत भन्दा फरक छैन, मसँग ... ...
Difavtomat के हो?
के लागि एक डिभ्याभमेट के हो? यो एक सर्ट सर्किट ब्रेकर हो र एक केसमा एक आरसीडी - यो ओभरलोड र इलेक्ट्रिक झटका बिरूद्ध लाइनको पूर्ण सुरक्षाको लागि आवश्यक छ। डिभ्भटोमेट एक संक्षिप्त नाम हो ...
ईसुलेशन कुकरको लागि उपयुक्त एल्युमिनियम वा कास्ट आयरन Cookware?
एल्युमिनियम वा कास्ट फलामको कुकवेयर एक इन्डक्शन होबको लागि उपयुक्त? सिद्धान्तमा, कुनै पनि कास्ट फलामको कुकवेयर इन्डक्शन कुकरहरूको लागि उत्कृष्ट हो, तर हामी आयातित कास्ट फलामको कुकवेयर खरीद गर्ने सल्लाह दिन्छौं, यससँग सहज र अधिक ...
कुन chainsaw हज्स्वार्न वा Stiel भन्दा राम्रो छ?
कुन चेन्सा हुस्क्वर्ना वा शान्त भन्दा उत्तम छ? मेरो लागि, हुस्कर्वना राम्रो छ, तर ब्रान्डेड एडिटिभ (तेल) किन्न तयार हुनुहोस्। शान्त पनि राम्रो छ, तर हुस्क्वर्ना काठको ठूलो खण्डका लागि डिजाइन गरिएको छ। मलाई यस्तो प्रश्न ...
क्या अक्षर सी मतलब वाशिंग मिसिन को प्रदर्शन मा एलजी। मिसिन लटका।
अक्षरहरू सीएलको अर्थ के हो एलजी वाशिंग मेशीनको प्रदर्शनमा। यो गल्ती होइन। सीएल - बच्चाहरू लक (बच्चाहरूबाट लक) अन्तमा निर्देशनहरू हातमा लिनुहोस् र पढ्नुहोस्। धुने मेशिन खराबी ...
म कहाँ भन्न चाहन्छु मल्टीकोक्कर Panasonic SR-TMH18 को लागि प्यान खरीद गर्न को लागी,
मलाई भन्नुहोस् कहाँ प्यानासोनिक मल्टिकुकर SR-TMH18 का लागि एउटा कचौरा किन्नुहोस्, नमस्कार, तपाईंले कतै भेट्टाउनुभयो कि? मँ पनि खोज्दै छु, म कहिँ पनि फेला पार्न सक्दिन ((उही समस्या: कचौराको दागमा खोलिएको थियो ...
किन कि टिभीमा हेट्ज एक होक्स र मार्केटिंग हो?
किन तिनीहरू भन्छन् कि TV मा HERZ धोका र मार्केटिंग छ ??? विशेषज्ञहरूका कथनहरूमा कुनै विरोधाभास छैन - वास्तवमा, टिभीहरू बीचको १०० हर्ट्जको समर्थनको बीचमा छविमा स्पष्ट देखिने भिन्नता छ र ...
कम फ्रस्ट, कुनै फ्रस्ट र फ्रिज को ड्रिप कूलिंग प्रणाली को बीच के अंतर छ? भाषा पहुँच गर्न सक्दछ?
लो फ्रस्ट, कुनै फोस्ट र फ्रिजको ड्रिप कूलि system प्रणालीको बीच के भिन्नता छ? के म एक सुलभ भाषा प्रयोग गर्न सक्छु? कुनै फ्रस्ट एक आधुनिक प्रविधि हो, जसको उपकरण फ्रिज गैर-फ्रिजि, पर्खालहरू, स्वचालित डिफ्रोस्टिंग र उच्च-गुणस्तरको कूलि guaranको ग्यारेन्टी गर्दछ ...
LG फ्रिज। अक्षरहरूको गुप्तिकरण।
फ्रिज LG डिकोडिंग अक्षरहरू। रेफ्रिजरेटरहरू LG आज, सबैभन्दा लोकप्रिय रेफ्रिजरेटर मध्ये एक 399 श्रृंखला हो। यस श्रृंखलाको फ्रिजहरू, लाइनमा सबै कुरा जस्तै, डिफ्रिज गर्न आवश्यक छैन। मार्किंगको विश्लेषण गरौं ...
92 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,540 प्रश्नहरू।